कमरेड केपी कसरी बने ‘ओली बा’ ? | Ratopati
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २३, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ– पूर्वी नेपालको जिल्ला झापा र सुदूरपश्चिमको जिल्ला हो कञ्चनपुर । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाका र प्रतिनिधिसभा सांसद एवम् नेकपाका युवा नेतृ निरुदेवी पाल कञ्चनपुरकी हुन् ।
‘बा’ शब्द एमालेको बैठकमै एक पटक बहसको विषय भयो । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच चर्काचर्की परेको थियो । नेता नेपालले ओलीलाई देवत्वकरण गर्न खोजिएको र पार्टी कोटरीबाट चलिरहेको आरोप लगाएपछि ओलीले आफूलाई देवत्वकरणमा रूचि नरहेको बताएका थिए । नेता नेपालले ओलीलाई उनी निकट कार्यकर्ताले ‘बा’ भन्ने गरेकोमा समेत आपत्ति जनाउँदै त्यस बैठकमा भनेका थिए, ‘बा होइन कमरेड भन्नुपर्यो । पार्टीलाई कोटरीबाट होइन, संस्थागत ढङ्गले चलाउनुपर्यो ।’ ओलीको जवाफ थियो, ‘मैले पुत्रवत व्यवहार गरेँ हुँला । पुत्रिवत् व्यवहार गरेँ हुँला । त्यसकारण बा भने होलान्, के गर्ने त ? कसैकसैलाई ‘आमा’ भनेको पनि सुनिन्छ ।’
सांसद निरु पाल– मनमोहन सबैका बा हुन हुने केपी ओलीलाई बा भन्न नहुने ?
खास त नजिकबाट उहाँलाई बुझ्दा ठ्याक्कै ‘बा’कै व्यवहार गर्नुहुन्छ । भेट्दा वा फोनमा कहिले काहीँ कुरा हुँदा पनि नातिनातिना कहाँ छन् ? उनीहरूलाई कस्तो छ ? ल छोरी आएकी छ, खाना नास्ता खुवाएर पठाउनु है भन्नु हुन्छ । जतिबेला पनि छोरीको व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनिसकेपछि ‘बा’ नभन्दा कस्तो कस्तो हुन्छ ।